हत्केला चिलाउँदा के पैसा आउँछ ? - HelloKhabar
परम्परागत मान्यता अनुसार हत्केला चिलाउँदा पैसा आउँछ या जान्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । प्रचलनमा दाहिने हात चिलायो भने पैसा जान्छ भन्ने भनाइ छ भने देब्रे हात चिलायो भने पैसा आउँछ भन्ने चलन छ। धेरैले हत्केला चिलाएको कुरालाइ आय वा व्ययसँग हेरेपनि चिकित्सकहरूले भने यसलाइ मान्दैनन् । हत्केला चिलायो कि कसैको पैसा आउने र कसैको जाने हुन्छ भनेर मानिसहरु भन्ने गरेको हामी सुन्दछौँ । तर, हत्केला चिलाउनु पैसासँग कुनै पनि तरिकाले सम्बन्ध नहुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । हत्केला चिलाउनु रोग नै भने होइन । रोग नभएपनि विभिन्न तत्वहको परिणाम हो तथा रोग लाग्न सक्ने संकेत हो।
किन चिलाउँछ त हत्केला ?
कोषहरु बृद्धि : छालाको कोषहरु तीब्र बृद्धि भएमा पनि हत्केला चिलाउने गर्दछ । कोषहरु छालाको सतहमा जम्मा भएपछि यस्तो हुन्छ। छालालाई मानिसले आफैँ कन्याउँदा पनि यस्तो समस्या आउँछ ।
झिंगाको संक्रममण : झिंगा हत्केलाको माथिल्लो सतहमा बस्दा यो समस्या आउँछ। बढी भिडभाड भएको ठाँउमा झिंगाको संक्रमण हुने गर्छ। विशेष गरी बालबालिकामा छालाको एलर्जी हुने गर्दछ। हत्केला धेरै नै चिलायो भने मधुमेह हो कि भनेर चेकअप गर्नु पर्दछ। हत्केला चिलाउनु मधुमेहको संकेत पनि हो। लिभरसँग सम्बन्धित समस्याले पनि हत्केला चिलाउन सक्छ । कलेजोमा गम्भीर समस्या नआउँदै हत्केला र खुट्टाको पैतला चिलाउँछ। रगत प्रवाह गर्ने प्रणालीमा र विशेष गरी लिभरमा एसिड उत्पन्न हुँदा हात हत्केला चिलाउँछ।
खानेकुराको एलर्जी : खानेकुराको एलर्जीले पनि हत्केला चिलाउँछ। कसैकसैलाई कुनै खानाले एलर्जी ग¥योभने त्यसको असर हत्केलामा पनि देखिन्छ। मानिसलाई फरकफरक खानेकुराले एलर्जी गर्ने गरेको हुन्छ । केही मानिसलाई अन्डा, बदाम, दूध र समुद्री खानेकुराले पनि एलर्जी गराउँछ ।
नाडी तथा हातमा हुने पिडा : नाडी तथा हातमा कुनै चोटपटक लाग्यो भने हात र औँलामा पीडा हुन्छ। जसले गर्दा हत्केला पनि चिलाउने गर्दछ। धेरै लेख्दा, टाइप गर्दा तथा हात र औँलाको बढी प्रयोग गर्दा पनि हत्केला चिलाउने गर्दछ ।
छालामा समस्या : मानिस कसैको छालामा नै समस्या छ भने पनि हत्केला चिलाउने गर्दछ। छालासम्बन्धि लाग्ने विभिन्न रोगहरुको कारण पनि हातको हत्केला चिलाउछ ।
बच्ने उपाय : हातको राम्रो सरसफाई गर्नुपर्दछ। हातमा विभिन्न किसिमका लोसन र क्रिम लगाएर हातलाई चिल्लो पार्दा हत्केला चिलाउने समस्या हट्छ। छालालाई कहिल्यै सुख्या राख्नु हुँदैन ।